Hongria : Mpanao Politika Namono Vady, Alika Jamba No Meloka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2013 10:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Tezitra tamin'ny resaka herisetra an-tokatrano voalaza fa mahavoarohirohy ny mpanao politika iray ao amin'ny antokon'ny mpitondra Fidesz ireo Hongroa mpiserasera amin'ny aterineto . József Balogh, ilay voalaza ho nidaroka ny vadiny izay voa mafy ka tsaboina any amin'ny toeram-pitsaboana, dia nilaza mamo ravehivavy ary nifandona tamin'ny alika jamban'ny fianakaviana. Fa na izany aza, araka ny filazan'ny tranonkalam-baovao Origo.hu, dia nambaran'ilay vehivavy fa nokapohan'ilay mpanao politika izy.
Niresadresaka tamin'Atoa Balogh ny tranonkalam-baovao FN24.hu taorian'ny nahalalàna ilay zava-niseho. Toy izao no nolazain'Atoa Balogh momba izany :
Moa va vadinao i Terike, ilay vaky loha izay tsaboina any amin'ny hopitaly any Kecskemét [tanàna]?
Eny, marina izany. Toy izao ny zava-nitranga, nody avy nanatrika fety izahay ny Alahady tamin'ny dimy ora maraina, nitondra hena iray tsatokaty nalaina avy any anaty fiara mba hohanina any an-trano i Terike. Manana alika Komondor iray milanja 80 kilao izahay, jamba izy io ary mora taitra, nihazakazaka izy ary nanosika an'i Terike, izay nianjera ka voadona ny lohany.
Karazanà alika Hongroa malaza amin'ny hafotsy sy halavan'ny volony ny Komondor. Nanombohan'ny andian-tantaranà alika malaza memes na ilay vehivavy iray nianjera tamin'ny fomba hafahafa ilay tantara mampitaintainan'ilay Komondor jamba. Nandefa ny angon-tsarin'ireo memes ny FN.24, raha nanomboka nampahafantatra ilay alika jamba tao amin'ny Facebook kosa ny bilaogy sandoka Hírcsárda.
Bilaogy Hírcsárda mizara ito sary ito amin'ny Facebook miaraka amin'ny teny hoe : “Tiako iray tapitrisa dia ho hitako indray.”
Meme iray avy amin'ny m00kid.tumblr.com.
Nisy vondron'olom-pirenena nikarakara hetsika iray atao hoe : ‘Mitondra miaraka ny alika – tsy manan-tsiny ny Komondor [hu]’, hanoherana ny herisetra ao an-tokatrano ny 1 May.
Taorian'ny ady hevitra tsy ela akory izay momba ny herisetra ao an-tokatrano any Hongria, dia nampimpongatra indray ilay olana mahatohina ity tranga ity. Araka ny kaontin'ny vadin'Atoa Balogh taloha, nampijalian'io lehilahy io izy nandritra ny 25 taona nivadiana.
Miantso ny fandraisan'andraikitry ny governemanta i Rosa_parks ao amin'ny bilaogy Kettős Mérce[hu], satria tsy maintsy atrehana io olana momba ny herisetra ao an-tokatrano io any amin'ity firenena Eoropa Tatsinanana ity :
Isikia mbola miaina ao anaty firenena manaiky lembenana, marefo, miankin-doha, izay [ ilàn'ny tsirairay fahavononana] ny fitoriana olona iray ao anaty fianakaviana noho ny herisetra an-tokatrano. Ampahany fotsiny ihany amin'ny tsy mampandroso ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana ny fototra araky ny lalàna tsy azo antoka loatra – ny tahotra no tena manjaka. Tahotra tena ara-drariny sy mazava. Mivonto fo ireo olona mora tohina [ho an'ireo iharan'izany zavatra izany], satria saika isam-pianakaviana dia misy herisetra an-tokatrano.